စိတ်ကြိုက်ပြော | Telenor Myanmar
*979*2*1*5# သို့​ခေါ်ဆိုပြီး အချိုသာဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်​များကို ​ရွေးချယ်​ ဝယ်​ယူနိုင်​ပါပြီ။ တယ်​လီ​နောအသုံးပြုသူများ မိသားစု မိတ်​​ဆွေ သူငယ်ချင်း ချစ်​ခင်​ရသူများ နှင့် ပိုမိုဆက်​သွယ်​နိုင်​ရန်​ တယ်​လီ​နောမှ မြန်မာနိုင်​ငံမှာ အသက်​သာဆုံး​သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်​သစ်​များကို မိတ်​ဆက်​​ပေး လိုက်​ပါပြီ။ အသုံးပြုသူများသည် USSD ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ Eload ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
၁ စက္ကန့်စာပေး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်များ
တယ်လီနော အချင်းချင်း အသက်သာဆုံးဖြစ်သော ၁ စက္ကန့်နှုန်း ဖြင့်သာကောက်ခံမည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ်များ
3 Days Telenor 3000Sec
သက်တမ် :3Days
ဝယ်ယူနေသော3Days Telenor 3000Sec
7 Days Telenor 5400Sec
သက်တမ် :7Days
ဝယ်ယူနေသော7Days Telenor 5400Sec
7 Days Telenor 7800Sec
ဝယ်ယူနေသော7Days Telenor 7800Sec
၃ ရက် ၃၀၀၀ စက္ကန့်
သက်တမ်း : ၃ ရက်
အပတ်စဉ် ၆၀၀၀ စက္ကန့်
သက်တမ်း : ၇ ရက်
အပတ်စဉ် ၈၁၀၀ စက္ကန့်
သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားထက် ဖုန်းဘေလ် ၈၀% ထိ ချွေတာနိုင်မည့် အသက်သာဆုံး ၁ စက္ကန့်စာပေး အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်း - ၇ ရက်စာ
ကြိမ်ဖန်များစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး သက်တမ်းတိုးအစီအစဉ်မပါ၀င်ပါ။
ဝယ်ယူနေသော Sate Kyite Pyaw Monthly 150 Mins
ဝယ်ယူနေသော Sate Kyite Pyaw Monthly 125 Mins
ဝယ်ယူနေသော Sate Kyite Pyaw Weekly 50 Mins
ဝယ်ယူနေသော Sate Kyite Pyaw 15 Days 100 Mins
ဝယ်ယူနေသော Sate Kyite Pyaw Daily 10 Mins
တယ်လီနော Prepaid အသုံးပြုသူများ “၇ရက်စာ တယ်လီနောအချင်းချင်း ၇၈၀၀ စက္ကန့်” အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“၇ရက်စာ တယ်လီနောအချင်းချင်း ၇၈၀၀ စက္ကန့်” အစီအစဉ်အား အသုံးပြု၍ ၇၈၀၀ စက္ကန့် စာ တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား ၇ ရက်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပြီး ၁စက္ကန့်နှုန်းထားဖြင့်သာကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်အားအကန့်အသတ်မရှိကြိမ်ဖန်များစွာရယူနိုင်ပြီး ဝယ်ယူသည့်အချိန်မှ နောက်ထပ် ၇ ရက် သက်တမ်းတိုးရရှိသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိအသုံးပြုသည့် ဟန်းဆက်သည် 4G VoLTE ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်သည့် ဟန်းဆက်ဖြစ်ပါက *979*5*8# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 4G VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
VoLTE ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်သည့် ဟန်းဆက်များအား https://www.telenor.com.mm/ my/personal/volte တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ စားရင်းတွင်မပါဝင်သော ဟန်းဆက်များသည် VoLTE ရရှိနိုင်သော်လည်း VoLTE ဝန်ဆောင်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား ရာနှုန်းပြည့်ရရှိရန်သည် အသုံးပြုသည့်ဟန်းဆက်အပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
၁ စက္ကန့်ပြော ၁စက္ကန့်ပေး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ် ဆိုတာဘာလဲ?
“၁ စက္ကန့်ပြော ၁စက္ကန့်ပေး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ် ” ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ?
၁ စက္ကန့်ပြော ၁စက္ကန့်ပေး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အစီအစဉ် ၏ အကျိူးကျေးဇူး နှင့် သက်တမ်း များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Benefits ( Seconds )
Validity ( days )
299 3,0003*666*1#
499 5,4007*666*2#
700 7,8007*666*3#
အစီအစဉ်ကို မည်သူတို့က ရယူနိုင်ပါသနည်း?
တယ်လီနော prepaid အသုံးပြုသူတိုင်းရယူနိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်ကိုရယူရန်အတွက် မည်သို့ လုပ်ဆောင် ရမည်နည်း?
*666*1# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း၊ MyTelenor App မှလည်းကောင်း၊ တယ်လီနော website ၏ Shop ကဏ္ဍတွင်လည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များမှ တဆင့် POS App (သို့) E-load မှလည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
*124*1# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လက်ကျန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်ကို အကြိမ်ရေ မည်မျှခန့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
အခြားသော Voice Pack ဝယ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါက မည်ကဲ့သို့ ဖြတ်တောက်မလဲ?
ရက်အတိုဆုံး pack မှ လက်ကျန်အား ဦးစားပေးဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
တယ်လီနော Voice အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် VoLTE ကို ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်သလဲ?
VoLTE သည် 4G/LTE ကွန်ရက်မှတဆင့် ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှုရှိခြင်းကြောင့် လက်ရှိ အသံကွန်ရက်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနိုင်ပါသည်။
VoLTE ဝန်ဆောင်မှုအား မည်ကဲ့သို့ ရယူမလဲ?
VoLTE အားသုံးစွဲနိုင်သည့် ဟန်းဆက်ဖြစ်ပါက *979*5*8# သို့အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 4G VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ဟန်းဆက်သည် VoLTE ဝန်ဆောင်မှုရ/မရ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ?
https://www.telenor.com.mm/en/personal/volte တွင်ဖော်ပြထားသည့် VoLTE ဝန်ဆောင်မှုရရှိသည့် ဟန်းဆက်စာရင်းတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။
မရရှိနိုင်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားမှ USSD ကုတ် သို့မဟုတ် E-Load မှတဆင့်သာရရှိနိုင်ပါမည်။
၁၂၀၀ကျပ် ၁၅၀ မိနစ်အစီအစဉ်မှ ၃ ရက်သာ သုံးပြီးဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်ကို ထပ်မံရယူလိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ?
၁၂၀၀ကျပ် ၁၅၀ မိနစ် အစီအစဉ်မှာ သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်ကို ထပ်မံရယူပါက ရယူသည့်နေ့မှ နောက်ထပ်သက်တမ်းကာလ ၃၀ ရက်ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းကာလအတွင်း အစီအစဉ်ကိုထပ်မံရယူခဲ့ပါက လက်ကျန်ရှိနေသေးသော မိနစ်များကို ဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ပါ။
မိနစ် ၂၀ ကျန်ပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်အစီအစဉ် ထပ်ဝယ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ?
သက်တမ်းကာလအတွင်း ထပ်မံဝယ်ယူသော မိနစ်များမှာပေါင်းစည်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်တွေမှာ ပုံမှန်အလိုအလျောက် ၀ယ်ယူသည့်စနစ် ပါရှိပါသလား?
ယခုအစီအစဉ်များတွင် ပုံမှန်အလိုအလျောက် ဝယ်ယူသည့်စနစ်မပါ၀င်ပါ။
ဘီလ်ဖြတ်တောက်ကြိမ်မှာ ဘယ်လောက်မိနစ် တစ်ကြိမ် ဖြတ်တောက်ပါသလဲ?
အစီအစဉ်တိုင်းတွက် ဘီလ်ဖြတ်တောက်ကြိမ်မှာ ၁ မိနစ် တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။